10-ka Haween Dunida Ugu Quruxda Badan 2019: Priyanka Iyo Deepika Kaalintee Ka Galeen (+Sawiro) – Filimside.net
10-ka Haween Dunida Ugu Quruxda Badan 2019: Priyanka Iyo Deepika Kaalintee Ka Galeen (+Sawiro)
Shabakada Wonderlist oo kamid ah shabakadaha caanka ah ee wararka xaqiiqada ah qoraan ayaa si rasmi ah usoo daabacday 10 haween ugu soo jiidashada badan sanadkaan 2019 waana dumar wadamo kala duwan ka kala socdaa.
Ma ahan tartanka quruxda balse waa qiimeyn ay sameesay shabakadan iyagoo soo qaateen dumar badan oo caan ah fadlan hoos kaga bogo 10-ka haween ugu soo jiidashada badan 2019 waxaana ku jiraan Deepika iyo Priyanka.
Waa atiriisho iyo sido kalena Model ah kana soo jeeda wadanka turkiga waana 25 jir waxay noqotay gabadha ugu soo jiidashada badan sanadkaan 2019 qeybihiisa hore iyada ayaana hogaamineysa liiskan..
Waa atiriisho kasoo jeeda America sido kalena Model-ka ka shaqeysa waxay noqotay gaabdhii labaad ugu soo jiidashada badan sanadkaan 2019 qeybihiisa hore qiimeyntii la sameeyayna kaalinta labaad ayee ka gashay.
Waa heesaa reer America ah sido kalena waa mid kamid ah shaqsiyaadka ugu taageeraha badan Instagram-ka waxay kamid noqotay 10-ka haween ugu quruxda badan 2019 qeybta hore liiskana kaalinta sedexaad ayee ka gashay.
4-Ana De Armas:
Atiriishada reer Cuban ee Ana de Armas taaso hader ka howl gasha Hollywoodka waxaa loo aqoonsaday mida afaraad ee liiskan soo gasha misane kamid ah haweenka ugu soo jiidashada badan dunida 2019.
Atriiishada ugu mushaarka badan Bollywoodka Deepika Padukone waxay liiskan kasoo gashay kaalinta 5-aad iyadoo kamid ah haweenka caalamka sanadkaan 2019 qeybihiisa hore ugu quruxda badan.
Nana waa mid kamid ah dumarka caalamka ugu soo jiidashada badan sanadkaan 2019 waxayna liiskan ka hiigsatay booska lixaad iyadoo kamid noqotay 10-ka haween ugu quruxda badan 2019.
Atiriishada hada kahor noqotay gabadha dunida ugu quruxda badan (2000) ayaa markale soo gashay liiska dumarka caalamka ugu quruxda badan caalamka balse markaan liiskan kaalinta 7-aad ayee kasoo gashay sido kale sanadkii hore 2018 waxay noqtay atiriishada ugu shidan qaarada Asia.
22 jirtaan kasoo jeeda Australia ayaa kaalinta 8-aad soo gashay dumarka caalamka ugu soo jiidashada badan qeybta hore 2019.
Waa atiriisho reer China ah kaalinta 9-aad ayeena soo gashay inkastoo ay si fiican u dadaashay hadana shabakada Wonderlist kaalint 9-aad ayee xidigtaan u aqoonsadeen inee ka gasho dumarka ugu quruxda badan.
32 jir Emilia Clarke sido kalena ah atiriisho iyo Model kana soo muuqatay Game of Thrones ayaa kaalinta 10-aad dhaxashay waxayna noqotay haweeneyda 10-aad ee ugu soo jiidashada ama quruxda badan caalamka qeybta hore ee sanadkaan 2019.
Waxaa Aqrisay 866